Ifakwe 4 * (sauna & balneotherapy) kufuphi Vittel kunye Epinal
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguSébastien
USébastien ufumene umlinganiselo weenkwenkwezi eziyi-5 kwi-100% yeendwendwe zakutshanje.
Siyakwamkela kwindawo yethu yokuhlala yabakhenkethi ene-4-star e-Mattaincourt, itofotofo, i-130 m2 enokuhlalisa ukuya kuthi ga kwi-8 abantu kwipaki enemithi yehektare enye.
Indawo ebekwe ngokufanelekileyo (iVittel kwi-18 km - Contrexéville kwi-25 km - Epinal kwi-30 km - iNancy kwi-50 km - iGérardmer kwi-70 km), kunye nemisebenzi emininzi eyahlukeneyo kunye neentlobo ezahlukeneyo kwindawo eyingqongileyo.
Ilinen yokulala ibonelelwe kunye ne-wifi. Iitawuli ozikhethayo xa uceliwe.
Endlini yethu ngokupheleleyo-oxhobele ineendlela ezininzi: indawo yayo wejografi, yonke loo magumbi nembono yale paka ngokunjalo zokulala ezintsha esemgangathweni, i yokugquma nebhate yokuzivavanya (ngaphandle kwentlawulo engaphezulu), ilayibrari imidlalo ezininzi ibhodi .
Zonke iivenkile eziyimfuneko kumgama oziikhilomitha ezi-5 kunye neevenkile ezinkulu ezininzi.
Ngobulumko, siya kuhlala sisesandleni sakho ukuba unqwenela ukwenza idinga kunye nomsebenzi wethu wezempilo wendalo.
Ngesicelo, singakucebisa ngemisebenzi yakho okanye sikunikeze iimephu zokuhamba kwakho. Kwizibini ezitshatileyo ezinabantwana, sinokunikezela ngenkonzo yokugcinwa kwabantwana kunye nokubolekwa kwezixhobo zomntwana.
Ngesicelo, singakucebisa ngemisebenzi yakho okanye sikunik…
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mattaincourt